Rosia: “Ny diabe, karazana..” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Oktobra 2018 2:38 GMT
Vakio amin'ny teny Português, македонски, Español, Shqip, English
Tokony hanao fihetsiketseham-panoherana tamin'ny 6 May tao Moskoa ny mpanohitra Rosiana, ny hariva ny fanokanana an'i Dmitry Medvedev ho solon'ny filoha Vladimir Putin, saingy tsy nanome alalana izany ny manampahefana ao an-tanàna – ka nofoanan'ny fikambanamben'ny mpanohitra, Other Russia ny Diaben'ny Mpanohitra tamin'ny minitra farany. An-jatony ireo mpanao fihetsiketsehana nosamborin'ny polisy na izany aza.
Mpampiasa LJ drugoi, bilaogera Rosiana malaza, namoaka sary sy famaritana ny “diabe, karazana”:
Ny takariva, teo amin'ny tsangambaton'i Griboedov ao amin'ny Chistye Prudy, mpanao gazety 4 625 sy polisy 8.416 no niandry ireo mpandray anjara tamin'ny Diaben'ny Mpanohitra, izay, avy eo niseho avy amin'ny lalana ery ampita.
Olom-bitsy 15-20 no nivory tao Pokrovka ary nifindra tany Chistye Prudy nankany amin'ny fiantsonan'ny metro, niaraka tamin'ny mpaka sary sy mpaka horonantsary vitsivitsy.
Nahita ny vondrona lavidavitra ny polisy ary nanakana izany teo akaikin'ny tsangambaton'i Kazakh [mpihira folk]. Tahaka ny nahenoako “grrrr … fifehezan-tena sy fahatoniana … grhm-hm-gr …” avy amin'ny tabataba lavareny eo amin'ny walkie-talkie an'ny polisy, notafihana avy amin'ny lalana rehetra ny mpanohitra [mpanao fihetsiketsehana] nandeha.
[Sary sy soratra bebe kokoa]
Mpisera LJ kozenko namoaka soratra amin'ny fasana ho an'ny Rosia Hafa:
Tsy nisy ny Diaben'ny Mpanohitra. Nanjavona ireo mpitarika, ary nikarakara korontana fohy maromaro tao an-tanàna ireo mpikatroka .
Eny, ry Rosia Hafa, mankasitraka ny fanjavonanareo. Tamin'ny taon-dasa, nahafinaritra ny niaraka taminareo, na nahaliana mihitsy aza. Ary teo am-piandohana dia toa hoe misy ny hoavy. Saingy ny fiafaràny dia lasa – mamela ahy – mankaleo sy mahamenatra.
Ireto misy fifanakalozan-kevitra avy amin'ny sehatra fanehoan-kevitra amin'ity lahatsoratra ity:
This post sounds like something written by an offended and disappointed viewer. As if you had bought tickets for this show. And the troupe ran away with you money. 🙂
Ity lahatsoratra ity dia tahaka ny zavatra nosoratan'ny mpijery iray voatsiratsira sy diso fanantenana. Toy ny hoe nividy tapakila ho an'ity fampisehoana ity ianao. Ary nandositra nitondra ny volanao ny tarika. 🙂
Ity lahatsoratra ity dia mitovitovy amin'ny zavatra nosoratan'ny olona voatsiratsira sy diso fanantenana. Tena diso fanantenana, satria tsy misy mpanao politika eto amin'ity firenena ity maneho ny fahalianany. […]